Kumanaan Carruur Reer Pakistan ah oo Cudurka dilaaga AIDS-ka lagu talaalay!
Thursday October 31, 2019 - 09:21:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbaahinta caalamka ayaa soo tabineysa musiibo la yaab leh oo ka dhacday wadanka Pakistaan, kadib markii la ogaaday in inkabadan kun ruux oo caruur u badan ay qaadeen viruska HIV, Kadib markii lagu duray irbado wasakheysan.
Wargeyska Newyork Times oo qoray warbixintan ayaa sheegaya in dadka hadda la diiwaan geliyay ee uu ku dhacay cudurka Aids-ka ay gaarayaan 1100 ruux, kuwaas oo 900 oo kamid ah ay yihiin caruur ka yar 12 sano.
Waxay dadkan ku noolyihiin magaalo lagu magacaabo Rotadiro oo dhacda bartamaha wadanka Pakistaan, iyadoona la ogaaday in sababta keentay iney qaadaan virus-kaas ay tahay, iyadoo uu dhakhatar ka howlgala magaalada uu halkii Cirbadba ku duri jiray caruur badan.
Dhakhtarka falkan ka dambeeya waxaa lagu magacaaba Mudafa Gangauru, waxaana uu magaalada ku leeyahay xarun caafimaad oo lagu daweeyo inta badan caruurta, waana tan keentay in dadka tiradooda intan ay gaareyso uu sabab u noqdo iney qaadaan xanuunkan halista ah.
Mid kamid ah dadka ay caruurtooda qaadeen xanuunka Aidiska ayaa sheegaya in maalin maalmaha kamid ah uu drkan u geeyey wiil uu dhalay, markii dambena uu billaabay inuu dhiig kaga qaado irbad horey loo isticmaalay.
Markii uu u sheegay iney tani macquul ahayn, kana hor imaaneyso xeerarka Caafimaadka iyo badqabka canugiisana, wuxuu ugu jawaabay in dadka degan magaalada Rotadiro ay fuqaro yihiin, oo aysan awoodin iney gataan siliinga cusub.
Police-ka wadanka Pakisaan ayaa Dhakhtarka eedan loo soo jeediyay gacanta ku dhigay, balse goordambe way sii daayeen, wuxuuna hadda si caadi ah u wataa howlihiisa caafimaad, iyadoo ay dhici karto inuu sii halaago umad kale.
Khubaro ku takhasusay Caafimaadka ayaa sheegaya in dalka Pakistaan ay ku badanyihiin dhakhaatiirta noocan oo kale ah, maadaama aaney dalku ka jirin dowlad adag oo kontorooli karta isbitaallada iyo goobaha Caafimaadka.
Waxaa liita guud ahaan Nadaafada, gaar ahaan Tima jarayaasha, Isbitaallada iyo goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan.
Dhacdadan la yaabka leh ayaa direysa fariin ku socota Dhakhaatiirta Soomaaliyeed, taas oo ah iney inta awoodooda ah ku dadaalaan inaaney uga darin bukaannada loo keenayo, ilaaliyaan shuruucda iyo xeerarka Caafimaadka oo ay iyaguba garanayaan.